Banky Sipem – Mitombo ireo tolotra omena - Book News Madagascar
Banky Sipem – Mitombo ireo tolotra omena
Posted on: September 28, 2018 Written by: Book News Categorized in: Brand journalism, Economie, Malagasy
Mivoatra manaraka ny vaninandro sy ny filan’ny mpanjifa ny tolotra omen’ny Sipem.
Mihamaro ireo tolotra eo anivon’ny Sipem
Nisy ny valan-dresaka ho an’ny mpanao gazety nataon’ny Sipem ny zoma lasa teo.
Raha niompana tamin’ny fampindraman-bola sy ny fitahirizam-bola ny banky Sipem (Société d’Investissement pour la Promotion des Entreprises à Madagascar) teo aloha dia nivoatra izany manomboka ny taona 2018. Efa misy ireo tolotra toy ny “e-banking”, ny fandraisana vola avy any ivelany, ny fanakalozana vola vahiny, ny fikirakirana vola amin’ny alalan’ny finday na ny “mobile-banking“, ny “opération de virement“, ny fampiasana ny “carte bancaire”.
Mandray anjara amin’ny fampandrosoana ara-toekarena amin’ny alalan’ireo tolotra mifanaraka amin’ny mpanjifa ny Sipem. Tanjona ny ho lasa “banque de référence” ho an’ny orinasa kely sy antonony (PME) ary ny orinasa goavana.
Marihina fa ny olon-tsotra sy ny mpandraharaha ao amin’ny tanan-dehibe no mpanjifa ny Banky Sipem.
Ankoatra izay dia mahatratra 50 ka hatramin’ny 60 ireo mpiasa raisiny isan-taona.
Mampiavaka ny Sipem ny fanomezany zana-bola 1% hoan’ireo mpametra-bola ao aminy. Ity banky ity irery ihany no banky tantanin’ny teratany Malagasy. Malagasy na mpandraharaha eto Madagasikara no mampiasa vola ao aminy.
Tagged as: bankymalagasy ebankingmadagascar mobilebankingmadagascar sipem
Previous post Antsahamarofoza – Ivotoerana fanofanana ny Tily eto Madagasikara
Next post Mise à jour des moyens de lutte contre les feux dans les parcs nationaux
0 comments on “Banky Sipem – Mitombo ireo tolotra omena” Add yours →